November 2008 - Living Zimbabwe
By Living Zimbabwe on November 23, 2008 in People
Camouflage clothing has for a very long time been popular urban clothing. If you are lucky enough, you can get yourself a pair of camouflage pants for as little as $1 on eBay. That bargain you get for your piece of clothing could get you into more trouble than you bargained for if you decide […]
By Living Zimbabwe on November 11, 2008 in Politics
The cartoon (courtesy of newzimbabwe.com) describes the one word that comes to mind when I think of Mugabe, Tsvangirai, Mbeki and SADC, ‘CIRCUS!’ The only difference with my mental image is that I see Mugabe as the ringmaster. The ringmaster is the most visible performer in a circus and guides everyone through the show in […]
The UK, US, Canada, Australia and New Zealand are popular destinations for Zimbabweans looking for greener pastures. With this migration brings the issue of family who have stayed behind in Zimbabwe wanting to have a holiday and visit their relatives in their new homes. Being Zimbabwean, applying for a visitors visa for any of the […]